I-NPA ichitha eyokubeka uGordhan amacala amasha | News24
I-NPA ichitha eyokubeka uGordhan amacala amasha
Cape Town – Izinsolo zokuthi uNgqongqoshe wezeziMali, uPravin Gordhan, uzophinde abekwe amanye amacala ngaphambi kokuba kushaye uKhisimusi azinasisekelo, lokhu kushiwo yiNational Prosecuting Authority (NPA).
Lokhu kulandela umbiko weCity Press ngeSonto wokuthi uNgqongqoshe uzophinde abekwe amacala, nokuthiwa ulwazi oluqhamuke ezikhulwini ezimbili eziphezulu kumaHawks kanye nesikhulu esiphezulu kuNPA.
Lama cala amabili azobe emayelana nalokho okwaziwa ngele-Rogue Unit, nokuwuphiko lwezobunhloli olwasungula ngesikhathi uGordhan esenguKhomishana wakwa-SA Revenue Service (SARS), kubika iCity Press.
NgoMsombuluko, okhulumela iNPA, uLuvuyo Mfaku, uthe noma ngabe yikuphi ukuqagula ngamacala akudingeki ngoba kuzodala itwetwe elingenasindingo nokuthi kungabi khona uzinzo.
“Udaba, njengoba luthinta iNPA, lonke alinasisekelo. Uphenyo luyaqhubeka futhi kukholakala ukuthi selusezingeni eliphezulu,” usho kanjalo engeza ngokuthi isinqumo siyothathwa kuphela uma ngabe sekuphothulwe isinqumo.
UMfaku uphinde wachitha nezinsolo zokuthi abaphenyi baleli cala abapheli emahhovisi eNhloko yeNPA, uShaun Abrahams, wathi lolu phiko lezokushushiswa kwabantu alukaze luhlangane nabaphenyi.